Blog မြား - Myanmar IT Development
Blog ရေးသားခကျြမြားအားလုံးကိုယျ့ BlogAdd
အကောငျးဆုံး Blog မြား (29)
WINDOW7TO MAC OS X LION
Window7ကို MAC OS X ပွောငျး သုံးခငျြသူတှအေတှကျ တငျပေးလိုကျပါတယျ
ဒီမှာ ဒေါငျး… Continue
1:00am က August 27, 2011 တှငျ komyo မှ ထညျ့ခဲ့သညျ —
ထငျမွငျခကျြ 27 ခု
15 Exlusive Themes For w7 http://hotfile.com/dl/80719301/eeb30af/15_super_theme_win7.rar.html
6:44pm က November 11, 2010 တှငျ သူရ မှ ထညျ့ခဲ့သညျ —
ထငျမွငျခကျြ 24 ခု
python အတှကျ website
programming ကိုလေ့လာနေတဲ့ သူတွေအတွက်အသုံးဝင်မယ်ထင်တဲ့website လေးတစ်ခုshare လိုက်ပါရစေသိပြီးသားလဲဖြစ်မှာပါညီမတက်နေတဲ့ ကျောင်းမှာ programming ကိုစသင်တော့ python ကိုသင်ပါတယ်python ကပျော်စရာကောင်းပါတယ်C++ ထက်တောင်လွယ်ပြီးပိုရှင်းပါတယ်ခု website ထဲ မှာ ကောင်း ကောင်း practice လုပ်လို့ရအောင် questions တွေ ၄၀၀ ကျော်ရှိတဲ့အပြင် tournaments တွေလဲ များကြီးပါ ပါတယ်အမြဲလဲ update လုပ်နေတော့ python အတွက် question တွေတော်တော်စုံပါတယ်try ကြည့်လိုက်ကြပါ… Continue
8:30am က October 11, 2010 တှငျ sakura မှ ထညျ့ခဲ့သညျ —
ထငျမွငျခကျြ 32 ခု
မွနျမာနိုငျငံ ကှနျပြူတာပညာရှငျအသငျး အသိအမှတျပွု စာမေးပှဲမြား
MCPA အသိအမှတ်ပြု စာမေးပွဲဆိုတာ ဘာလဲ?မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသ်းက ကြီးမှူးပြီး - ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်များ ကွန်ပျူတာပညာရပ်နှင့်ပတ်သက်ှု၍ နားလည်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့် တိုးတက်မြင့်မားလာစေရန်။- သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာနယ်ပယ်တွင် နားလည်တတ်ကျွမ်းသူတစ်ယောက်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။MCPA က ဘာစာမေးပွဲတွေကို ကျင်းပနေလဲ?MCPA အနေနဲ့ Software Engineering နဲ့ Network Engineering တို့အတွက် စာမေူးပွဲများကို ကျင်းပပေးနေပါတယ်။… Continue
8:30pm က October 10, 2010 တှငျ manawphyulay မှ ထညျ့ခဲ့သညျ —
ထငျမွငျခကျြ 42 ခု
မိတ်ဆွေများ တရားနာ၊လေ့လာနိုင်ကြရန်-- သာဓု မခေါ်လဲရပါတယ်...
>>>> http://theinngu.org/ (သဲအင်းဂူဆရာတော်)
>>>> http://www.mahasi.org.mm/ (မဟာစည်-၁)
>>>> http://www.mahasi.org/ (မဟာစည်-၂)
6:00am က October 3, 2010 တှငျ ကြယ်တာရာ မှ ထညျ့ခဲ့သညျ —
ထငျမွငျခကျြ6ခု
နိုငျငံခွား ရုပျရှငျဇာတျလမျးသဈတှကေို ဒေါငျးပီးကွညျ့ကွရအောငျ
ပထမ ဒီပလေးယာလေးကို ဒီနရောမှာ ဒေါငျးယူလိုကျပါ ပီးရငျ အဲ့ဒါလေးကို အရငျ ရမျးထားလိုကျပါ နောကျအောကျကလငျ့လေးကို ကျောပီကူး http://www.tom365.name/ ;အငျတာနကျ explorer နဲ့ဖှငျ့ ဒါမှမဟုတျ အခုန အပျေါက… Continue
10:30pm က September 29, 2010 တှငျ MYO ZAW HTET မှ ထညျ့ခဲ့သညျ —
ထငျမွငျခကျြ 10 ခု
ယူနီကုတျ ၅၊၁ အကွောငျး အနှဈခြူပျ
ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ website များတွင် Unicode 5.1 compatible Font ကို တဖြေးဖြေးခြင်း စသုံးရမှာ တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar web developer များအနေဖြင့် သိသင့်သည်များကို အတိုဆုံးဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ Myanmar… Continue
7:00am က August 28, 2008 တှငျ Okisan မှ ထညျ့ခဲ့သညျ —
ဒီနေ့လိုင်းကာစီးလားရင်းနဲ့ တွေ့ကြုံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ပြောပြချင်တယ်ဗျာ
လိုင်းကားပေါ်ကိုခပ်နွမ်းနွမ်းယောက်ျားတစ်ယောက်ရယ် မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ ကလေးလေး ၅နှစ်သားလောက်လေးရယ် တက်လာကြတယ် ယောကျာ်းကြီးကရောဂါဝေဒနာခံစားနေရပုံပေါ်တယ်လေ ရင်ဘတ်လေးကိုဖိလို့ပေါ့ ထိုင်စရာနေရာ… Continue
11:30am က September 16, 2010 တှငျ htike မှ ထညျ့ခဲ့သညျ —
ထငျမွငျခကျြ 17 ခု
၂၁ ရာစု အိုင်တီလုပ်ငန်းတွေမှာ အမိန့်ပေးခိုင်းစေတာထက် ဝန်ထမ်းတွေကို သူ့တို့ကိုယ်တိုင်တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိအောင် တွန်းအားပေးရမယ်။ ဝန်ထမ်းတိုင်းတက်ကြွစွာနဲ့ တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နိုင်အောင် ဖန်တီးပေးရမှာပါ။
လက်ရှိအချိန်မှာ IT လောကဟာ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အရည်အသွေးတွေနဲ့ ခေါင်းဆောင်သစ်တွေကို လိုအပ်နေပါပြီ။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ကိုပဲ ကျွန်တော်တို့ဟာ IT ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာ အဓိကအပြောင်း အလဲကြီးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
1:30pm က January 6, 2010 တှငျ Shine မှ ထညျ့ခဲ့သညျ —
အာဇာနညျနေ့ အမှတျတရ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး ၏ မိနျ့ခှနျးမြား စုစညျးတငျဆကျမှု
1:30pm က July 12, 2010 တှငျ kokoronotomo မှ ထညျ့ခဲ့သညျ —
ထငျမွငျခကျြ 23 ခု
(၁) စိတျဓါတျအောကျတနျးကသြူစိတျဓါတျညံ့သူ၊ စိတျဓါတျအောကျတနျးကသြူဟာ သငျယူထားတဲ့ ခတျေပညာတှေ ဘယျလောကျဘဲတတျစကောမူ၊ ဘှဲ့တှရောထူးတှေ ကွီးမားစကောမူ၊ မိဘအသိုငျးအဝိုငျး ခမျြးသာစကောမူ လူတျောမဟုတျ၊ လူကောငျးလညျးမဟုတျ၊ စာပလေုံးဝ မတတျသူလောကျမှ အသုံးမကြ တနျဖိုးမရှိသူတှဖွေဈတယျ။… Continue
8:30pm က May 31, 2010 တှငျ YIN MIN KHINE မှ ထညျ့ခဲ့သညျ —
ထငျမွငျခကျြ3ခု
8:00pm က May 25, 2010 တှငျ လူမှန် မှ ထညျ့ခဲ့သညျ —
၁၀။ Contentment =… Continue
6:00pm က May 11, 2010 တှငျ Shine မှ ထညျ့ခဲ့သညျ —
ထငျမွငျခကျြ7ခု
Intel Core i Series CPU မြား (သို့)intel ရဲ့ဖိုကျတာမြား။
Intel ရဲ့Nehelem နည်းပညာကိုအခြေခံထားတဲ့ Core Series တွေ CPU လောကကိုစိုးမိုးနေတာအားလုံးအသိပဲဖြစ်မှာပါ။
Core Series CPU အကြောင်းကိုမပြောခင်မှာ အရင်ဆုံးသိထားရမယ့်… Continue
10:00pm က May 10, 2010 တှငျ ရခိုင်သားလေး မှ ထညျ့ခဲ့သညျ —
ထငျမွငျခကျြ 20 ခု
နညျးပညာ အငျအားကွီးတို့၏ တိုကျပှဲ
သူတို့နှစ်ဦး၏ ဆက်ဆံရေးက အစကတော့ ဟုတ်သလိုလိုပင်။လွန်ခဲ့သော ၃နှစ်က Google က အမှုဆောင်ချုပ် အဲရစ်ရှမစ်က ဆန်ဖရန်စစ္စကို စင်မြင့်ပေါ်သို့ အပြေးတစ်ပိုင်းတက်လာကာ၊ Apple တွဲဖက် တည်ထောင်သူ စတီဗင်ပီဂျော့ဘ်စ်အား လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်သည်။ နှစ်ပတ်လည် Mac World Expo ပြပွဲ၌ တစ်ခေတ်ဆန်း အံ့ဖွယ်ပစ္စည်း၊ iPhone ကို မစ္စတာဂျော့ဘ်စ်က မိတ်ဆက်ပေးရာတွင် သတင်းသမားများနှင့်… Continue
11:00pm က April 30, 2010 တှငျ Thant Tin Oo မှ ထညျ့ခဲ့သညျ —
ထငျမွငျခကျြ 12 ခု
Windows NT, 2000, XP တို့မှာ Drive တှေ Hide လုပျကွညျ့ရအောငျ
Windows Operating System ထဲမှာရှိတဲ့ Drive တွေကို Show/Hide/Restrict လုပ်လို့ရပါတယ် GroupPolicy , Registry , ThirdParty Application တို့နဲ့ လုပ်လို့ရပါတယ် ကျွန်တော် Registry Keys တွေနဲ့ လုပ်ကြည့်ထားတာလေးပါ
Drives A: B: C: D: တို့ထက်ပို ပြီး Drive တွေကို Manage(Hidden) လုပ်ချင်လာရင်
Start>Run.. > regedit ပေါ့ဗျာ (Beware! Registry Keys တွေကို… Continue
3:30am က April 28, 2010 တှငျ Cthux မှ ထညျ့ခဲ့သညျ —
8:00pm က April 25, 2010 တှငျ sakuramiemie မှ ထညျ့ခဲ့သညျ —
ထငျမွငျခကျြ 18 ခု
ယခုကျမ နည်းနည်းတွေးတတ်လာပါပြီ။ယခင်ငယ်ငယ်ကသိခဲ့ဖူးသောအသိက ပုဂံ… Continue
11:00pm က April 25, 2010 တှငျ sakuramiemie မှ ထညျ့ခဲ့သညျ —
ထငျမွငျခကျြ 26 ခု
Online ပျေါက ရောငျးကုနျ လူသား
ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကြိုက်ပါ့မလား။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာဘာသာ
မွေးနေ့ အိမ်ထောင်ရှိမရှိ ဒီလိုအကြောင်းတွေကိုကော တစ်စိမ်းတစ်ယောက်ယောက်ကို အသိပေးချင်မှာပါလား။ အဖြေကဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဟာ Internet အသုံးပြုနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ရင်
အဲဒီအချက်အလက်တွေကို နေ့စဉ်ပဲ ကိုယ်ကပဲဖြန့်ဝေပေးသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကတော့ နေ့စဉ်… Continue
11:00pm က March 20, 2010 တှငျ Thant Tin Oo မှ ထညျ့ခဲ့သညျ —
ကြှနျတျောရေးတဲ့ ကြှနျတေျာ့ ဘလော့
မည်သူကိုမှ မဝေဖန်မသုံးသပ်ပါ။ မည် သူ တစ်ဦးတစ်ယောက် ပြောဆိုသည့် ကဲ့ရဲ့ခြင်း ချီးမွန်းချင်း ပြန်လည် ဖြေရှင်းခြင်းပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ ။ ကျွန်တော် ဝေလင်းစိုး ဒီစာကို ကိုယ် စိတ်ထဲတွင်ရှိဒါရေးချင်းဖြစ်သည်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနေလို့ မြန်မာလို စကား ပြောတတ်လာတယ် ။ မြန်မာစာ တတ်အောင် ကျောင်းတွေမှာ မြန်မာစာကို မူကြိုကနေ ဆယ်တန်းထိ သင်ခဲ့ရတယ်။ အခု အင်တာနက်ပေါ်လာပြန်တော့ ကွန်ပြူတာဆိုဒါကို သိရအောင် အင်္ဂလိပ်လို ကီးဘုတ်တွေက နေလေ့လာသင်ကြားပြီ wininnwa ဆိုတဲ့မြန်မာဖောင့်ကို… Continue
1:00pm က March 6, 2010 တှငျ problemclean မှ ထညျ့ခဲ့သညျ —
ထငျမွငျခကျြ 8 ခု
နောကျဆုံးရှေးခယျြခံ Blog ရေးသားခကျြမြား
လူသိအမြားဆုံး အရှေးခယျြခံ Blog ရေးသားခကျြမြား
ကမ်ဘာ ယူရနေီယံ အရှုပျတျောပုံ ( ရနျမြိုး ) TRUE STORY
လအလိုကျ သီးသနျ့ရှေးခယျြခံထားရသညျမြား စုဆောငျးမှု
2011August (2)2010November (1)October (3)September (2)July (3)May (5)April (12)March (4)February (2)January (2)2009December (2)August (1)July (1)June (1)May (2)April (1)February (2)2008August (1) Myanmar IT Development မှ သငျ့အား ကွိုဆိုပါတယျ
how to view only me mail from facebook
အမွနျဆုံး ကူညီပေးကွပါ။ HELP ME , HELP ME , HELP ME
HELP ME! HELP ME ! HELP ME !
Making Myanmar Subtitle file ( srt file)
How to Know the IP address of AccessPoint??
Added2Forum Categories
© 2014 Created by MMITD. Badge မြား | ပွဿနာ တဈခု တိုငျကွားရနျ | Terms of Service